>ခဵဉ်ပေၝင်ရက်ြသည်ရဲႚိုံင်ငံရေးဖတ်စာ | MoeMaKa Burmese News & Media
>Moe Cho Thin - The Night without Music
>support MKN &amp; activists
ဇင်လင်း - အစိုးရ ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြတိုင်း ပြည်သူတို့အပေါ် အခွန်တိုးကောက်သင့်သလား?
Tu Maung Nyo - ကိုယ်တော်မှိုင်း ရာဇဝင်တွေလည်းရိုင်းခဲ့ရပြီ အဖိုးရေ
>Maung Yit - What Next after Registration? Worship China's Relic
>Chef Kyaw Thu
>Win Pe Bag - 22
Mudita Shwe Kyaung -2year of founding food charity with 88 generation students
ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈
မိုးမခအယ်ဒီတာမင်းမဵားက စာရေးသူကို စာဖတ်သူမဵားကုသဘာပေးသည့် ပေးစာတေကြို ပေးလြာ၏။ မဵက်စောင်းကလည်း ခဲူပလိုက်သေးသည်။ ဇာဂနာူပက်လုံးတခုကိုသာ သတိရမိသည်။ “ရေးခဵင်တာရေး၊ ဒၝတော့ မရေးနဲႚ။ ဆိုခဵင်တာ ဆို ဒၝတော့ မဆိုနဲႚ၊ တီးခဵင်တာတီး ဒၝတော့ မတီးနဲႚ”လိုႚ ဒိုင်လူုကီးက မိန်ႚမြာသည်။ “ဆရာရေ … အဲဒီ “ဒၝတော့” ဆိုတာကို လင်းတော်မူပၝ” ဆိုတော့ ဒိုင်လူုကီးက “မေးခဵင်တာမေး၊ “ဒၝတော”့ မမေးနဲႚ ” လိုႚူပန်ေူဖတာကို ပြဲကဵခဲ့တာ သတိရသည်။ သိုႚသော်လည်း ရေးတော့ ရေးရအုံးမည်။ စာတည်းက “ဒၝတော့” မတင်ဘူးဆိုလဵင်တော့ အရပ်တကာလညြ့်ူပီး ခဵဉ်ပေၝင်ရကြ် လညြ့်ရောင်းနေရုံသာ။
နအဖ၏ ဂဵိန်းတုတ်တုတ် မဵက်လညြ့်ပြဲုကီး လာပေဦးတော့မည်။ ၁၉၇၀ ကေဵာ်က ဆရာဝင်းခက် ရေးခဲ့သော “မဵက်လညြ့်ဆရာုကီး” ကဗဵာထဲက မူလပထမ မဵက်လညြ့်ဝိဇ္ဆာ အလီမူလာဗိုလ်နေ၀င်း ကဲ့သိုႚ မဵက်လညြ့်မပိုင်သည့် ဗိုလ်သန်းရေအြဖိုႚ ဤမဵက်လညြ့်ပြဲကား မဵက်လညြ့်ပြဲထက် သူဌေးသမီး ကားတင်ေူပူးပီး အပိုင်ုကံသည့် ပြဲမဵြိးသာူဖစ်သည်။
ဓာတ်ခိုက်ိံငြ့် နတ်ုကိက်ြဆိုသကဲ့သိုႚ ပြဲလန်ႚတုန်း ဖဵာခင်းလိုသည့် ဘယ်ပဝေသဏီကမြ လူထုအကဵြိး မဆောင်ဘူးသည့် တတိယအုပ်စုအမည်ခံ ပရောဂဵက်ပညာယြိတစိုံငြ့် သူတိုႚုသဇာခံ လူငယ်တစုမြာ မီဒီယာအခဵြိႚမနြေ၍ တောင်အူေူမာက်အိူံငြ့် သံေုကာင်ဟစ်လာုကသည်ကို တြေႚရသည်။
“ရတုန်းယူထား စေဵးမမဵား”၊ “နောက်ခၝလာ နောက်ခၝစေဵး”၊ “အြေိာံင်းသေခဵာူခင်းသာ ပဓာန” စသည့် ဟိုကြေႚ သည်တက်၊ သည်ကြေႚ ဟိုတက် ပေၞလစီမဵြိးစုံဖင့် အခေဵာင်သမားဝၝဒကို အထင်အလင်း ကိုယ်ထင်ူပလာုကသည်မြာူမင်သူအပေၝင်း ရက်ြဖယ်ြကောင်းလသြည်။
“နယ်ခဵဲႚကို ပူးသတ်မည်”ဟုေုကြးေုကာ်ူပီး ဒိုင်အာခီကို လက်ခံသည့် ၂၁ ဦး တိုႚ ပူးကပ်ူပီး အလိုတော်ရိူဖစ်သြားပုံ၊ ခေတ်အဆက်ဆက် စစ်တပ်ိံငြ့်ပေၝင်ူးပီး မဆလထဲရောက်သြားသည့် ဦးသိန်းဖေူမင့်မအြစ ဦးခင်မောင်အုန်း (တကသ) အဆုံး လက်ဝဲသမားတိုႚ နလံမထိူိုံင်ခဲ့ပုံ၊ ပၝလေရာ သခင်တင်ူမ မည်ကဲ့သိုႚ နာမည်ပဵက်ခဲ့ရပုံတိုႚကို သမိုင်းကငြ်းဆက် တမင်ူဖတ်ထားခံရသည့် လူငယ်မဵားအနေိံငြ့် မသိုံင်ရြာသည်မြာ စိတ်မကောင်းစရာပင်။
ဝေးဝေးမုကည့်ဘဲ “၈၈” မြ ကိုအေးလငြ်၊ NLD မြ Dr စိုးလင်းတိုႚူဖစ်ပဵက်နေပုံ၊ ဦးအောင်ုကီး၊ိံငြ့်တကြ တခဵိန်က ရဲရဲတောက်ုကီးမဵား၏ ယနေႚပင်္စက္ခအေူခကိုကည့်ူပီး စစ်တပ်လက်ကိုင်တုတ်ိုံင်ငံရေးသမားမဵားဘ၀ကို သံဝေဂယူကာ ကိုယ်ပေးသည့်မဲူဖင့် ကိုယ်ူပန်အစော်ကားမခံရအောင် သတိထားသင့်လသြည်။
သူတိုႚပေးသည့် “၇၅ ကဵပ်သား”မြာ ကိုယ့်အတက်ြခဵည်းမဟြုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရြေႚမြုကံ့ဖြံႚ၊ စစ်တပ်၊ ကိုအေးလင်ြတိုႚကဲ့သိုႚ အလိုတော်ရိမဵား၊ မိုံသီဟ ပရောဂဵက်ဆရာုကီးမဵား စုပ်၍ကဵန်သည့် မသဒ္ဌၝရေစာ အရိုးအရင်းကို ကိုက်ရမည်ကို မမေ့သင့်ပေ။
သူရဲဘောင်ေုကာင်လိုက်ပုံက စက်တင်ဘာတုန်းက ဘုန်ုးကီးတြေ ရိုက်သတ်ူပလိုက်သည်ိံငြ့် “ဟာ … မရတော့ဘူး” ဆိုပီး ဇနက္က လုံႚလိံငြ့် အညံ့ခံဖိုႚူပင်ုကတော့သည်။ ဟိုဘက်က အေူမြာက်ိံငြ့် ရယ်ြလိုက်တိာံငြ့် အလူံဖတြင်ုကတော့သည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် အဖြိံပ်ခံလာခဲု့ကသည့်ိုံင်ငံရေး မဵြိးဆက်ဟောင်းမဵာိးံငြ့် အေူခခံလူတန်းစားမဵား မဵက်ြိာံကို မထောက်၊ လတ်တလော အသက်ရခြေဵာင်ခဵင်တာလေိးံငြ့် “စစ်ဒၝးမိုး သရဲစီးဝၝဒ”ကို “ကုန်းပိုးလည်းခံတော်မူပၝ၊ ရေဘြောတော်ကဵူပတြော်မူပၝ” ဟု သဘောရြိ ကရောဟိခဵင်ုကသည်။ “ဗုံကီးသည် လညြ့်စား နားခဵဲႚခဲ့တယ်” ဟု ညည်ုးကရလိမ့်မည်။
ကိုယ်မိံစ်ြသက်သည့်ကိင်္စတရပ်ကို ကန်ႚကက်ြလဵင် လူထုကို ပြိုိံပ်စက်လိမ့်မည်ဟု မိုးကြိးပစ် ထန်းလဵက်ကာ ယုတ္ဇိဗေဒကို နထိုႚပလိုႚသားကပၝ လက်ခံမည်မဟုတ်။ စစ်တပ်ကို လူသတ်လိုင်စင်ပေးသည်ကို တူဖည်ူးဖည်းေူပာင်းလဲမဟြု မဵက်မန်ြစိမ်းတပ်ုကည့်သူမဵားက “ူမက်ေူခာက်ဒီမိုကရေစီ”ကိုေုကာ်ူငာလာုကလ္တွင်လည်ူးမက်စိမ်းအရသာကို တပ်မက်သူမဵားက စောင်းငဲု့ကည့်စရာမလို။ူမက်စိမ်းတိုႚ ရြိရာသိုႚ ရြာဖေဖြိုႚသာ လိုပေလိမ့်မည်။ စစ်အုပ်စုက တောသားလူမိုက်အထိာံငြ့် သြေးတိုးစမ်းလာသည်ကို ထီမထင်သော သံမဏိစိတ်ဓာတ်ိံငြ့်ူပတ်ူပတ်သားသား ကန်ႚကကြ်ုကဖိုႚပင် ရြိပၝသည်။
သင်းတိုႚအေူခခံဥပဒေကို ဗိုလ်ခဵပ်ြအောင်ဆန်းတိုႚ အဂဿလိပ်စက္ကြူဖကြို “အုန်းကီးပေပၝ”ူဖစ်အောင် လုပ်သကဲ့သိုႚႛ အူပတ်ရငြ်းမြ တော်ပေလိမ့်မည်။ ဗိုလ်ခဵပ်ြကဲ့သိုႚ လူအား၊ လက်နက်အား တောင့်တင်ူးဖည့်ဆည်းဖိုႚ အဝေးရောက်လပ်ြရြားသူမဵား၌လည် တာဝန်ရြိပေသည်။
စစ်အတငြ်း ခရီးသည် ဦးသိန်းဖေူမင့် တယောက်တည်ိးံငြ့် မဟာမိတ်ထံမြ အကူအညီရအောင်ုကိံိုံင်ခဲ့သေးသည်။ အဝေးရောက် အစိုးရအဖြဲႛုကီိးံငြ့် ထောင်ခဵီသော လပြိရြားသူမဵား၏ အစမြ်းအစကို ဂဃနဏ ထုတ်ူပရမည့် အခၝပေတည်း။
“၉၀ ရြေးကောက်ပြဲသည် ယခုလူငယ်မဵားကို ကိုယ်စားမူပတြော့”ဟု ဆိုလာသူမဵားကို ဘယ်သူတေကြ ကိုယ်စာူးပြိုံင်သလဲဟု မေးလိုပၝသည်။ အနာမခံဘဲနဲႛ မည်သူမ္တွ အသာမစိုံိံင်ပေ။ ဤ ၁၇ိံစြ်ိံစ်ြအတငြ်ိးိုံင်ငံရေးလောက၌ လူႚစည်း ဘီလူးစည်း တော်တော်ူပတ်ခဲ့လေူပီ။ ခရီးရညြ် ခဵီတက်ပြဲတငြ် သက်လုံကောင်းသူသာ ကဵန်စူမဲ။ ဘေးထိုင် ဘုေူပာသူမဵား လူတောမတိုး။ နောက်မလြာ၍ “ကိုယ်ဦး”လုပ်ခဵင်သည့် လြေုကြံစီးလိုက် ဆရာမဵား၏ ဇာတိမြာ သူတိုႚစကားထဲကပၝူပနေလေူပီ။ိုံင်ငံရေး အကင်းပၝးသည့်ူမန်မာလူထုကို ကေဵာရိုးမတောင့်သည့် ပညာတတ်အခေဵာင်သမားမဵား နားလညြ့်ပၝးရိုက် မလုပ်ိုံင်ပၝ။
မဵက်ြိာံငယ်သည့် စာပေ၊ ယဉ်ကေဵးမြ အိုံပညာ ပူဇော်ပြဲ
ဆရာစမြ်း ၇၁ိံစြ်၊ ၁၇-၂-၂၀၀၈ ကူပည့်သည်ုကားရသည်။ သူမရြိကတည်းကူမန်မာစာပေ ဝေဖန်ရေး၌ သိသိသာသာ အားယုတ်ခဲ့သည်။ သူလည်ူပည်ပ၌ မဵားစြာအထီးကဵန်သည်။ ယနေႚ ၁၈-၂-၂၀၀၈ တငြ် ဆရာူမသန်းတင့်ဆုံးတာ ၁၀ိံစြ်ူပည့်ေုကာင်း သိရသည်။ သူႚလက်ရာ စာပေစုံကိုပင်ူပန်လည်စုစည်း မထုတ်ိုံင်သေး။ တိုင်ူးပည်ကုံကမ္ထာ မကောင်းသူဖင့် စာပေ၊ ယဉ်ကေဵးမတြိုႚမြာလည်း မဵားစြာ ဆုတ်ယုတ်ရသည်။
ဤ ၂၀၀၈- ၂၀၀၉ ၌ သက်တမ်း ရာူပည့်ုကမည့် ဦးသန်ႚ၊ မင်းသုဝဏ်၊ မောင်ထင် တိုႚကဲ့သိုႚသော စာပေပညာရင်ြမဵား၊ူမြိႚမူငိမ်း၊ ရြေူပည်အေး၊ ရေတြိုင်ညနြ်ႚ ကဲ့သိုႚ ဂီတပညာရင်ြမဵားကို မည်သိုႚ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ေူမာက်ိုံင်လိမ့်မည်ဟု မတြေးတတ်ပၝ။
၂၀၀၉ မိံ္ဇလေိးံစြ် ၁၅၀ူပည့်ကိုလည်း စေဵးရောင်းပြဲမ္တွသာ စစ်အုပ်စုက ခငြ့်ူပပြေလိမ့်မည်။ နယ်ခဵဲႚလက်အောက်၌ပင် ယဉ်ကေဵးမြိံငြ့် ဇာတိဂုဏ် ထိန်းခဲ့သည့် မိံ္ဇလေးသားမဵား နအဖခေတ်ရောက်မြ တရုတ်ကဋ္ဋန်ဘ၀ ရောက်ရရြာတော့သည်။ မိံ္ဇလေးသာမက တူပည်လုံးကို မထြေးလေးေူမမြဵြိသလို နဂၝုးကီးက မဵြိပေအုံးတော့မည်။
လတ်တလော အားရစရာ ယဉ်ကေဵးမြ ဆန်းသစ်ူခင်းဟူ၍ သီးလေးသီး ကိုသာူမင်မိသည်။ လတ်ြလပ်သည့် ရေေူမ၌ိုံင်ငံရေးအရိုံုးကားဝေဖန်ိုံင်သည့် အိုံပညာမည်မ္တွ ထနြ်းကားေုကာင်း သီးလေးသီးက ညနြ်ူပနေသည်။ူမန်မာယဉ်ကေဵးမအြစုစုကို ကိုရီးယားရုပ်ရင်ြစီးရီး လိငြ်းအောက်မြ မုကာမတင်ူပန်လည်ရုန်းထိုံင်လိမ့်မည်ဟု မ္တွော်လင့်ခဵက်သစ်မဵား ပေၞလာရတော့သည်။
လူကို ခြေးကိုက်တာ သတင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့လား
ူမန်မာနေးရငြ်း အယ်ဒီတာ ခြေးဆြဲခံရသည့်ကိင်္စိံငြ့် ပတ်သက်၍ူပည်တငြ်းမီဒီယာလောကမြ အသံဆူလာတော့မည် ထင်သည်။ သံရုးံမဵား သံကငြ်းမဵာိးံငြ့် သံနယ်ဇင်း (စာနယ်ဇင်း မဟုတ်တော့)ူပည်တငြ်ူးပည်ပခရီး တ၀ီးဝီး ဂဵာနယ်လစ် ဆိုသူမဵားကလည်း “တိတ်တိတ်နေ ထောင်တန်”ဆိုသည့် မူဝၝဒကို စနြ်ႚလတြ်ုကတော့မည်ဟုကား၏။ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ လနြ်ိံနြ်း သိန်းခဵီသည်ဟု ဂုဏ်ယူနေရသည့်ူမန်မာ ဘလောက်နယ်ဇင်းဆရာမဵားက ကိုနေဘုန်းလတ်ကို ဖမ်းစဉ် ၀ိုင်းဝန်း ထုကြုကသကဲ့သိုႚ တခဲနက်သော တော်လဲသုံကီးမဵြိုးကားရမည်ထင်သည်။
ဘက်မလိုက်သည့် မီဒီယာတိုက်ုကီးမဵားက ကေဋ္ဋးမြေူးပစြုသူဖင့် လူလားေူမာက်လာသည့် ဘက်မလိုက်ဂဵာနယ်လစ်ဆိုသူမဵားကတော့ ဆိံ္ဋခံယူပြဲုကီးနောက် ကောက်ကောက်ပၝအောင် လိုက်ုကမည်ူဖစ်ရိာိုံင်ငံရေးအူမင်မရြိဘဲ သတင်းထောက်ဗူးသငြ်းခံထားရသူမဵား၏ သတင်းလက်ရာမဵားကို ဂဵာနယ်ကေဵာ်ဦးခဵစ်မောင်အား သေရြာကြိံူးပီူးပလိုလသြည်။ သိုႚမဟုတ်လည်း သူတိုႚကို အဲဒီကို အရင်လတ်ြလိုက်မြူဖစ်လိမ့်မည်။
“ဒၝတော့” မရေးတော့ပၝ။ နောက်တပတ် ဆက်ရေးဖိုႚ အကေ့း ခဵန်ခဲ့တာူဖစ်သည်။